Madaxweyne Siilaanyo, Hogaanka KULMIYE Iyo Mudanayaasha Golaha Wakiilada Kaga Jira Oo Fooda Is Daray Doodo Iyo Cabashooyin Lagu Cashirayay Madaxweynaha Iyo Xukuumaddiisa – Araweelo News Network (Archive)
Madaxweyne Siilaanyo, Hogaanka KULMIYE Iyo Mudanayaasha Golaha Wakiilada Kaga Jira Oo Fooda Is Daray Doodo Iyo Cabashooyin Lagu Cashirayay Madaxweynaha Iyo Xukuumaddiisa
Hargeysa(ANN)Kulan aanay saxaafadu goob ka ahayn oo ay si gaara ugu kulmeen qasiraga Qasriga Madaxtooyadda Madaxweyne Siilaanyo, Hogaanka Kulmiye iyo Xildhibaanada Golaha Wakiiladda kaga jira Xisbigaa ayaa shalay si balaadhan loogu falanqeeyay kala daadsanaan ku timi xisbiga tan iyo markii uu doorashadii madaxtooyada 2010, ku guulaysatay.
Inkasta oo aan saxaafada loo ogolayn kulankaa, balse waxay xoggaha iyo tibaaxa kasoo baxay xubno mihiim ah oo ka qaybgalay u sheegeen shebekada Araweelonews in ujeeda kulanku ahayd sidii ay istiraatiijiyad midaysan uga yeelan lahaayeen xiligan kala guurka ee tartanka doorashooyinka, isla markaana dib uhabayn iyo qorshe midaysan loola iman lahaa.
Hase yeeshee kulankaa oo ay ka qaybgaleen xildhibaanada inta baddan kasoo baxay xisbiga Kulmiye ee golaha wakiilada iyo hogaanka xisbiga ayaa isu bedelay garnaqsi . kadib markii ay xildhibaanada golaha wakiilada oo hadalka qaatay qudbad Madaxweyne Siilaanyo iyo hogaanka xisbigu ka jeediyeen halkaa kadib, waxayna si weyn u dhaliileen xildhibaanadu xukuumadda oo ay sheegeen inay ka xidhiidh furatay, isla markaana waxay cabashooyinkooda xildhibaanadu ku muujiyeen sida aanay xukuumadda iyo iyagu isaga warqabin iyo sida aanay deegaanadii laga soo doortay ee ay uga ololaynayeen xukuumadda xiligii kaanbaynka doorashada Madaxtooyada ugu laaban karin, iyagoo qaarkood ku dooday xildhibaanada inaanay ka jawaabi karin su’aalaha ay dadku weydiiyaan, waxayna dhaliilaha dusha u saareen Madaxweyne Siilaanyo oo ay ku tilmaameen inuu meesha ka saaray xisbinimadii . kadib markii uu dhismaha xukuumadiisa ka sameeyay dad aan shaqo kul lahayn xisbiga Kulmiye iyo kuwo xisbigii UDUB ahaa. Sidoo kalena aan wax laga qaban balanqaadyo la galay doorashadii madaxtooyada.
Waxayna Madaxweyne Siilaanyo ka dalbadeen sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa ee loo soo celin lahaa taageeradii. Laakiin sida ay xaggahaasi sheegayaan Wasiirka Madaxtooyadda Xirsi Xaaji Cali ayaa ku gacansaydhay cabshooyinka dhinaca waxqabadka ee xldhibaanadu soo jeediyeeni, wuxuuna kulanka ka akhriyay guulo ku waajahan waxqabadka Xukuumada, isagoo ku dooday inaan mar marsiinyo laga dhigin inaanay xukuumaddu waxba qaban.
markaa ka dib ayaa madasha doodo iyo sawaxan ka bilaabmay, taas oo keentay in Xildhibaan Axmed Weyne oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Wakiiladda KUlmiye inuu ka xanaaqay Difaacii ay Xukuumaddu ka gashay dhaliilaha jira ee ay fooda u galin kari la’ yihiin bulshada, waxaanu inta uu isla kacay miiskii ku dhiftay Caagadii biyaha ahayd ee uu sitay dabadeedna uu iskaga soo baxay Madaxtooyada, isagoo si cadho ah u yidhi, “ marhadaan lays dhegaysanayn waan iskaga tegayaa meesha.” Arrintaa oo ay ka xumaadeen xildhibaanada madasha fadhiyay oo Madaxweynu dhaliishooda iyo cabashadooda ka gaarabay.
Guddoomiye ku-xigeenka golaha Wakiiladda Sh. C/casiis Samaale ayaa sida xogahaasi sheegayaan xaal ka bixiyay xildhibaanka fadhiga ka baxay isla markaana uu dejiyay jawagii madasha. Doodaha qaar ayaa sida ay xoggahaasi sheegeen waxa lagu soo qaaday tuhuno la xidhiidha inay xildhibaanada qaarkood ku biireen Ururada cusub ee siyaasada, balse waxa madasha laga sheegay inaan arrintaa wax cadayn ah loo hayan oo aanu jirin xildhibaan kuwii Kulmiye oo weli si cad u sheegay inuu ku biiray Urur kale oo cusub.
gebagebadii kulankaa ayaa sida ay xogahaasi sheegayaan , waxa uu Madaxweyne Siilaanyo ka garaabay waxyaabo baddan oo uu balanqaaday inay xukuumad ahaan wax ka qabanayaan, isla markaana waxa loo balamay in dib laysugu soo noqdo, iyadoo Hogaanka Kulmiye iyo dabcan Xildhibaanada ay xukuumaddu u sheegtay inay soo sameeyaan qorshe iyo iyo istiraatiijiyad midaysan oo ku waajahan arrimahaa iyo sidii loo waajihi lahaa wacyiga siyaasadeed ee cusub.
Dhinaca kale doodaha kulankaa ayaa kusoo beegmay xili ay dalka ka socdaan kaanbayno siyaasadeed oo dib usoo nooleeyay beelaysigii iyo xulufaysigii. Kadib markii ay xukuumadda Siilaanyo fasaxday tartanka ururada siyaasada, isla markaana ay dalka iska diiwaangeliyeen 15 Urur siyaasadeed oo cusub, iyadoo waqtigan khilaafyo waaweyn iyo burbur soo waajahay labadii xisbi qaran ee mucaaradka oo hore u jiray, kuwaas oo ay adagtahay inay saaxada siyaasada kusoo laabtaan marka la gaadho doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo tartanka ururada siyaasada ee April 2012.
Published January 9, 2012 By info
Wasiirkii Hore Ee Gaashaandhiga Aadan Mire Waqaf Oo Geeriyooday
أنا لله وأنا إليه راجعون Bogga Tacsida Marxuum Aadan Mire Waqaf